Nantsi into endiyithathayo. Ubuntatheli bobuntatheli busebenzisa uxinzelelo olungenakoyiswa kurhulumente wethu obhengeza itoni yemicimbi. Ewe kukho inkxaso enamacala amabini ekuchazeni ngokutsha kunye nokunciphisa umda wokuba ngubani okanye yintoni ubuntatheli. Nabani na ogrogrisa ukuveza iingxaki zikarhulumente angaphulukana nokukhuselwa kwakhe ngamajelo eendaba phantsi koMgaqo-siseko wethu. Bonke abezopolitiko bangayithanda loo nto… oko kuthetha ukuba banokusebenzisa imikhosi yaseburhulumenteni ukugrogrisa kwaye yoyikise abo bangavumelani nabo.
Nokuba uyavuma na Edward Snowden okanye hayi, ulwazi alukhuphileyo lwazisa uluntu kwaye lwabangela ingqumbo yeenkqubo apho i-NSA yayihlola kuthi. Lo mthetho uyilwayo awuchaphazeli ukuba semthethweni kwento eyenziwe nguSnowden. Eyoyikisayo, inokuba nefuthe lokuba ingaba intatheli eyayisikhuphileyo yayisemthethweni na, nangona wayengummi waseMelika. Kwakukhululwa izinto ezihleliweyo ukuqokelela iindaba ngokusemthethweni?
Mhlawumbi iRiphabhlikhi esemandleni ingatsho ukuba i-MSNBC ayikho semthethweni. Mhlawumbi iiDemokhrasi ezisemandleni zingatsho ukuba iindaba zeFox News azikho semthethweni. Ungathini ukuba intatheli ibhengeza iscandal sikarhulumente Ngaphantsi kokuqokelelwa kweendaba ngokusemthethweni? Ngaba unokuphoswa entolongweni kunye nehlazo elingcwatyelwe? Ezi ziingxaki nje kwimithombo yeendaba zemveli. Kuya kusiba kubi xa ucinga nge-Intanethi kwaye nokuba ukubhala inqaku kwi-Wiki kukhuselwe (awunakuchazwa njengablogi okanye intatheli).
Emuva xa kwakubhalwa uMgaqo-siseko, nawuphi na umntu oqhelekileyo kwisitalato owayenokuboleka okanye afumane umatshini wokushicilela intatheli. Ukuba ubuyela umva kwaye uphonononge amanye amaphepha ephepha elinye awayeprintwe ngelo xesha, ayemanyumnyezi. Abapolitiki batyholwa ngobuxoki obupheleleyo ukuze babasasaze kuluntu ukuze bangcwabe iinjongo zabo zezopolitiko. Ukuba yintatheli bekungafuneki ukuba ube nesidanga… awukhange uphinde upele okanye usebenzise igrama efanelekileyo! Kwaye imibutho yeendaba ayizange ivele kude kube ngamashumi eminyaka kamva njengoko amaphephandaba aqala ukuthenga iisetyhula ezincinci. Oku kukhokelele kwimithombo yeendaba zosasazo esinayo namhlanje.
UDoug -yintloko nje phezulu, bendinengxaki yokusebenzisa isandiso sam se-buffer (khange ifumane i-URL) kwaye andikwazi ukusebenzisa u-Google + kwindawo yakho yesabelo kuba "ibisezantsi" kwiphepha kwaye andinakukwazi ukuskrola . Ukuvutha kuya kuba mnandi.
Enkosi ngokwabelana .. Ndifunde kakhulu ..